Izany no fiasan'ny rakibolana izay nampidirin'i Apple tao amin'ny OS X | Avy amin'ny mac aho
Izany no fiasan'ny rakibolana izay nampidirin'i Apple tao amin'ny OS X
Ny rafitra OS X dia rafitra iray feno sy marobe ary tsy miafina amin'ny olona ary na dia ireo mpampiasa vaovao ny rafitra aza dia mila herinandro vitsivitsy. hahatsapa ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana amin'ny rafitry ny solosaina Apple, OS X.
Androany izahay dia hiresaka aminao momba ny fitaovana iray, na dia tsy voamarika ao aza izy io ary tsy dia voatonona anarana ao amin'ireo lahatsoratra mety ho hitanao amin'ny karazany hafa tranonkala de Miresaka ny olan'ny Apple izy ireo, fitaovana iray nivoatra nandritra ny taona maro io.
Izahay dia miresaka momba ny rakibolana misy ny rafitra OS X. Azonao atao ny manokatra ity fitaovana ity amin'ny Launchpad> folder LAZAO> Rakibolana na avy amin'ny Spotlight. Andao hojerentsika hoe inona ilay fitaovana kely sy mahery malagasy amin'ny OS X.
Rehefa manokatra ilay fitaovana isika dia aseho ny varavarankely izay namboarina ny takelaka dimy, izay azontsika tononina anarana Rehetra, Rakibolana, Anglisy-Espaniôla, Apple ary Wikipedia. Rehefa tsindrio ny takelaka samihafa dia aseho antsika ny dikan'ny teny iray ary azontsika atao ny mampitaha izay ananan'i Apple ao amin'ny rakibolany sy izay soratan'ny mpampiasa amin'ny Wikipedia na ny fandikany azy amin'ny fiteny hafa.
Ary koa, raha mankany amin'ny menio ambony isika Rakibolana> Préférences ... Afaka manampy diksionera na thesaurus vaovao izahay amin'ny teny espaniola na amin'ny fiteny hafa. Araka ny hitanao dia fitaovana iray izay, na dia tsy voamariky aza, dia mahery vaika sy haingana.
Marihina fa tamin'ny fivoaran'ny OS X, ny Spotlight izay azontsika idirana amin'ny alàlan'ny vera kely manandratra eo amin'ny menio ambony an'ny Finder, dia nahazo fahaiza-manao ary rehefa manoratra teny iray ankoatry ny fikarohana azy ao amin'ny fisie hita amin'ny solosaina, raha mikorisa amin'ny sisin'ny sisiny isika, eo ambanin'ny farany dia misy fidirana amin'ny rakibolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Izany no fiasan'ny rakibolana izay nampidirin'i Apple tao amin'ny OS X
Salama namana, tsara be ny hevitrao fa mila fampahalalana mifandraika amin'ny macbook air sy HD aho.
TE HANOVA NY HD DEFAULT NY MACBOOK AIR 13 -AKO AMIN'NY kapila SSD iray, azo atao ve izany ???
MANKASITRAKA NY FANONTANIANAO
Valiny amin'i MANUEL
Raha manana mac misy fikitika an-kery ianao, dia tsindrio avy hatrany ny teny raha adika amin'ny teny anglisy
Apple dia nanofa ny orinasa tavoahangy tavoahangy Pepsi teo aloha tany Sunnyvale tamin'ny tetikasany Titan
iCloud dia azo arovana na dia ny fidiran'ny Apple tenany vetivety aza